Ieslọ ọrụ Diesel jenerato, ndị na - eweta ya - China Diesel generator Manufacturers
Usoro usoro Hongfu AJ-C na-akwado injin Cummins. Fudị Hongfu AJ-C dị na ntụkwasị obi dị elu, ọnụahịa ojiji dị ọnụ ala, ndụ ogologo ndụ, mmezi dị mfe. A na-eji ya n’ebe niile n’ọdụ ike, ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ na ebe a na-egwupụta akụ wdg.
Usoro usoro Hongfu AJ-DE na-akwado injin Deutz. Emission ọkọlọtọ-EU II, EUIII ma ọkọlọtọ usoro maka dị iche iche ahịa. Oke 22KVA-625KVA, arụmọrụ zuru oke na nrụpụta na-aga n’ihu, njikwa mmachi, ọnụ ahịa mmanụ ọkụ, mmụfụ wdg.
Hongfu nakweere injin Perkins ma wepụta AJ-PE usoro mmanụ ọkụ diesel. Nzube nke AJ-PE usoro bu iji nye anyi gen-set user. A obere ego / na-agba ọsọ na-eri ihe ngwọta.
Hongfu AJ-Y usoro nakweere Yanmar engine nke sitere na Japan na mbụ.
Usoro Hongfu AJ-XC na-akwado injin na FAWDE. Usoro usoro Hongfu AJ-XC dị na ntụkwasị obi dị ukwuu, ọnụahịa ojiji adịghị ọnụ, ndụ ọrụ ogologo, mmezi dị mfe. A na-eji ya n’ebe niile n’ọdụ ike, ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ na ebe a na-egwupụta akụ wdg.
Usoro usoro Hongfu AJ-L na-akwado igwe Lovol nke nwere njirimara nke usoro dakọtara, mkpọtụ dị ala, oriri dị ala na arụmọrụ dị elu. A na-eji ya eme ihe ebe niile n’ime nkwukọrịta, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, oru ngo, ụlọ ọrụ na Ngwuputa wdg.
Usoro Hongfu AJ-WP na-akwado injin Weichai. Weichai otu engine iche gụnyere Weichai na Baudouin ụdị abụọ. Weichai ika engine nso si 23KW ka 400KW Baudouin ika eninge nso si 406kw ka 2450kw.
Usoro Hongfu AJ-YC nakweere YUCHAI engine nke nwere atụmatụ nke kọmpat, mkpọtụ dị ala, oriri mmanụ na arụmọrụ dị elu. A na-eji ya eme ihe ebe niile n’ime nkwukọrịta, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, oru ngo, ụlọ ọrụ na Ngwuputa wdg.
Usoro ihe omume Hongfu AJ-YT na-anabata injin YTO nke nwere njiri arụkọtara ọnụ, mkpọtụ dị ala, obere mmanụ ọkụ yana arụmọrụ dị elu. A na-eji ya eme ihe ebe niile n’ime nkwukọrịta, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, oru ngo, ụlọ ọrụ na Ngwuputa wdg.
Usoro usoro Hongfu AJ-SC na-akwado injin SDEC nke nwere njirimara nke usoro dakọtara, mkpọtụ dị ala, obere oriri ọkụ na arụmọrụ dị elu. A na-eji ya eme ihe ebe niile n’ime nkwukọrịta, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, oru ngo, ụlọ ọrụ na Ngwuputa wdg.
Ihe onyonye onwa Hongfu AJ-R setịpụrụ adamots Y485BD, N4100, N4105, R6105, R6110 na 6D10D wdg nke ụlọ ọrụ inyocha Ricardo mepere na Weifang. Injin ndị ahụ nwere arụmọrụ dị mma ndị ọzọ gụnyere ọnụego ezi uche dị na ya, obere mmanụ oriri, ntụkwasị obi dị elu, mfe iji dozie wdg
Ego njikwa, 240kw Generator, Obere Generator, Dizel Generator Na Kubota Injin, Ahịa Generator ji arụ ọrụ, Ahịa Dizel Generator,